Warbixin-Sidee loo sugaa amaanka Muqdisho kadib furitaanka wadooyinki xirnaa?. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Kadib markii la furay wadooyin muhiim u ah isu socodka Muqdsho oo xirna , waxa la dareemayaa is bedel dhanka sugitaanka amniga ama howlgalka ciidamada amaanka ee magaalada.
Guutada 14-ka Octpber oo kamid ah Milatriga Soomaaliya lana aas aasay kadib qaraxii masiibada ahaa ee October 14-keedi ka dhacay isgoyska Zoobe ayaa ku sugan wadooyinka laga soo glo magaalada Muqdisho ee u dhaw Shabeelooyinka , waa Contaroolada Blacd iyo Afgooye.
Ka sukow meelaha laga soo galo magalaada waxaa jira in sido kale is bedel laga dareemyo isgoysyada waa weyn ee Muqdisho.
Gadidka ka soo gala ama ka yimaada Ex-Cntraol Afooye oo ay joogaan askar ka tirsan Guutada 14-ka October si aad ahna loogu baraayo ayaa waxaa ay ilaa Km4 imaanayaan iyada oo aan melna ciidan ku joojin.
KM4 waxaa ku sugan ciidamo Boolis ah oo dhamaan gaadiidka hubinaya aqoonsiyada iyo sharciyada gaadiidka ee ay watan , kuw soo gudba Km4 qaar baa taleex u leeanaya mana jiraan ciidan dhankaasa ku baraya , gaadiidka soo gaara waada shaqalaaha ayaa la baarayaa marka kale o ciidmao boolis ah aayaa ku sugan kuwo aada dhanka wadada Libera ee aada Suuqa Beerta degmada waaberi waa la hubinaya si lamid ah sidaasi kuwa u guba wadada aada sayidka ayaa la hubinaya iyadoo gadiidka dadweyanah ay u gudbikaraan wadada howlwadaag.
Gawaarida wadada shaqaalaha , ama Km4 uga yimaada halka loo yaqaano suuqa beerta ayaa la kulamya ciidamo Boolsi ah oo ilaa isgoyska Ceelgaabta ee xamar jajab u taagan si tel tel ah , ama lagu arkayo loto kasta oo akmdi ah wadaasi dheer.
Isgoysyada Tarabuunka ,Howlwadaag , Falooransa , Afarta jardiin , Sanca ,Maanabooliyo ayaa ah kuwo aysan jogin ciidan oo gaadidka iskaga gudbayaan si caadi ah .
Gaadiidleyda isticaamsha wadada sodonka ee Muqdisho ayaa noo shegay in aysan jirin ciidan jooga halkasi ., waxaana horey ugu sugnan jiray ciidamada Xasilinta.
“Maalinti waxaan dhibaato ku qabnay in an marno ama wadad sodonka isticmaalno labo mar haatana ugu yaraan lix jeer ayaan manta tagay: ayuu yiri darawal u waramay Hornafrik
Shacabka magalada si gara ah gaadiidleyda ayaa ah kuwo aad ugu faraxsan is bedelka ka jira isu socodka Muqdisho , kadib maalmo badan oo aan la isku gudbi Karin.